Hoy, kuwiinna oomman oo dhammow, xagga biyaha kaalaya, xataa kii aan lacag haysanow, kaalaya, wax iibsada… lacagla’aan iyo iibla’aan ku qaata. Haddaba bal maxaad lacag ugu bixisaan wax aan cunto ahayn? Oo wixii aad ku hawshooteenna maxaad ugu bixisaan wax aan idin dherjinayn? Bal aad ii maqla, oo waxa wanaagsan cuna, oo naftiinnuna ha iskaga istareexdo barwaaqo miidhan. Dhegihiinna soo dhiga, oo ii kaalaya, i maqla oo naftiinnuna way noolaan doontaa, oo anna waxaan idinla dhigan doonaa axdi weligiis ah, kaasoo ah waxyaalahii naxariista lahaa oo la hubo ee aan Daa’uud u ballanqaaday. Rabbiga doondoona inta isaga la heli karo, oo isaga barya intuu dhow yahay.
Tags:Boqortooyada IlaahIlaah maammulkiisanebi DaanyeelNebi Ishacyaahsabuur Daa'uudSuurat al-KawtharSuurat An- Naaswax sii sheegidyo oo sabuurka